Anuz Kulung's Blog: के हो एफिलेट मार्केटिङ ?
Anuz Kulung's Blog
के हो एफिलेट मार्केटिङ ?
अनलाइन मार्केटिङको दुनियाँमा एफिलेट मार्केटिङ एउटा महत्वपुर्ण पाटो बनेको छ । विशेष गरी सहज तरिकाले विभिन्न बस्तु तथा सेवा बिक्रि वितरण गर्न सहज बनाइदिने यो सिष्टममा पछिल्लो पटक कैयौ विश्वका ब्यक्तिहरु यो क्षेत्रमा आवद्ध भई काम गरिरहेका छन् ।
छोटो समयमा घरमै बसि बसि एफिलेटको माध्यमबाट कैयौ डलर कमाएका उदाहरणहरु छन् । राम्रो र भरपर्दो कम्पनीहरुमा आवद्ध भएर कमाइ गरिरहेका कुराहरु तपाईले सोसल मिडिया साइटहरुमा प्रशष्त प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
सबैभन्दा धेरै विश्वमा चलेको एफिलेट कम्पनीहरुमध्ये ClickBank.com पनि एक हो । Ebay.com, Amazon.comहरुले विश्व बजार हल्लाइरहेका छन् ।
यि कम्पनीहरुले बस्तु तथा सेवा दुवै खरिद गरिरहेका छन् । घरमै बसेर राम्रो तरिकाले विक्रि गरिरहेका ब्यक्तिहरुले अत्यन्तै धेरै कमिसन आम्दानी गरिरहेका छन् ।
John Chow (www.johnchow.com) Canada , Peng Joon (www.pengjoon.com) Malasiya , Michale Force (www.digitalaltitude.com), Tracey Walker (www.traceywalker.com) जस्ता ब्यक्तिहरु विश्वमा चलेको इन्टरनेट मार्केटरको रुपमा चिन्न सकिन्छ ।
अर्को कुरा पछिल्लो समयमा डिजिटल तालिमहरु (Digital Training Services) बिक्रि गर्ने कम्पनीहरु थुप्रै निस्के । सन् २००८ बाट यि खालका कम्पनीहरुले निकै फड्को मारेको पनि देखियो । Empowernetwork.com, mobe.com, aispire.com, nationalwealthcenter.com, ultimatecycler.com, infinitydownline.com हरु चलेको कम्पनीहरु हुन् । जसले आफ्नो सिस्टम क्रेट गरेर विश्वमा रहेका बेरोजगार ब्यक्तिहरुलाई सहज तरिकाले मार्केटरको रुपमा काम दिइरहेका छन् ।
भनेपछि के हो त एफिलेट मार्केटिङ ? यो एउटा इन्टरनेटको प्रयोग गरेर साथै इन्टरनेटबाट उपलब्ध सोसल मिडियाहरुको प्रयोग गरेर मार्केटि गर्ने सिस्टमलाई एफिलेट मार्केटि हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । कसरी मार्केटि गर्ने भनेर म तपाईलाई अबको आउने पोष्टमा सिकाउनेछु ।
विगत ४ बर्षयता देखि म आफै पनि अमेरिकी नागरिक Peter Wolfing (www.peterwolfing.com) को कम्पनी Multiplex Systems Inc. USA भन्ने कम्पनीबाट आयोजना
गरेका एफिलेट प्रोगामहरुमा आवद्ध भएर काम गरे । काम गराइ र सिक्ने अवसरमा मैले यहि कम्पनीबाट धेरै फाइदाहरु प््रााप्त गरे ।
ले हालशालै निकालेको प्रोगाम Easy1up.com म आफै पनि संलग्न भएर काम गरिरहेको छु । यो सिस्टमबाट कसरी काम गर्ने, कसरी मार्केटि गर्ने भन्ने विषयमा म आगामी दिनमा अपडेट गर्दै लैजा
नेछु । तपाई हेर्दै यो मार्केटिङ सिस्टममा काम गर्न सक्नुहुनेछ ।
Posted by Pokhara News at 11:45 PM
Tweets by @lovelyanuz
Follow and earn now!
युवाहरुलाई भरपर्दो अवसर अनलाइन जब
It's Published at "Living With ICT Magazine" Magh..... –अनुज कुलुङ अनलाइन जबको बिषयमा धेरै चर्चाहरु सुनिरहेका छौ । द...
अनलाइन मार्केटिङको दुनियाँमा एफिलेट मार्केटिङ एउटा महत्वपुर्ण पाटो बनेको छ । विशेष गरी सहज तरिकाले विभिन्न बस्तु तथा सेवा बिक्रि वितरण गर्...
दुरा बाबुसँग त्यो साढे दुई घण्टा ......
अचेल म समयको खुब ख्याल गर्ने भएको छु । सायद मलाई पीर थपिएर पनि होला । आफ्नो कमाई खाने थलोको पीर, यता अवसर गुम्ला कि भन्ने पीर, एता बिजनेशमा...
Prashant tamang and Geeta Aley got married life
Congratulation! Indian Idol, Nepalese Nishan Happy Married Life. I am proude to prashat tamang. He is very intelligent and active person o...
अनलाईन प्रोगामहरुमा हाई रिटर्न मनि दिनेहरु अधिकांश कम्पनीहरु फेक पनि हुन्छन् ।
इन्टरनेट जब त्यस्तो जब हो । जोकोहि मान्छेले खाँसै पत्याउन गाह्रो मान्छ । यहाँबाट कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ त ? भन्ने बिष...
नेपालमा पढाईको अर्थ जागिरमा भाग्यचिठ्ठा ।
यति खेर भन्ने हो भने म डिप्लोमा सेकेन्ड इयरको परिक्षा दिएर बस्ने मान्छे हँु । तर के गर्ने बाध्यता भनौ कि के भनौ नेपालको परिवेश नै यस्तै भएको...
.... Online Job, Easy Job.....अनलाईन जब गर्न चाहनेहरुको लागि सुनौलो अवसर
अनलाईन जब गर्न चाहनेहरुको लागि सुनौलो अवसर .....धेरै साथीहरुले अनलाइन जबको बारेमा म कहाँ इमेल, एसएमएस अनि प्रत्यक्ष भेटघाट अनि अनलाइनमा सोध...
साच्चिकै Easy1UP अनलाइन बिजनेशले पैसा दिन्छ त ?
24th September, 2016 Time: 10:42 Anuz Kulung पछिल्लो समयमा ब्लगमा म फेरी तपाईहरुको निम्ति आउन थालेको छु । दिनमा कम्तिमा एउटा ब्ल...
बिश्वास भन्ने चिज खै के हो, के हो ? म त सोच्न नै सकिन । जीबनमा उत्तरचढाब, उकालो ओराली भैराख्ने रहेछ । खै के भनु । म मान्छेलाई चाँडै बिश्वास ...
ब्लग भनेको के हो ?
ईन्टरनेटको यो दुनियाँमा आजकल सबैले ब्लग प्रयोग गर्नु अति नै जरुरी छ । नेपालमा त झन् ब्लगको खासै प्रयोग भएको पाईदैन । सबै ब्यक्तिले ब्लग...